सावधान ! काठमाडौमा बढ्दैछ अनौठो घट`ना, डेराका लागि कोठा खोज्दै आउनेहरु लु’टे’रा र ह’त्या’रा - Nepali in Australia
October 14, 2020 autherLeaveaComment on सावधान ! काठमाडौमा बढ्दैछ अनौठो घट`ना, डेराका लागि कोठा खोज्दै आउनेहरु लु’टे’रा र ह’त्या’रा
काठमाडौमा अनौठा घ`टना बढ्न थालेका छन् । कोठा खोज्ने बहा`नामा आउने युवाहरुले लु टे र हिडेको घ`टना सेलाउन नपाउँदै भक्तपुरमा जग्गा किन्ने वहानामा पुगेका तीन जनाले एक जनाका ज्यान नै लिएका छन् ।
दुई महिनाअघि दुई युवक कोठा खोज्दै पेप्सीकोलास्थित एउटा घरमा पुगे। पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्ट नजिकै घर भएकी पवित्रा विडारी उप्रेतीको घरमा डेरा खोज्दै पुगेका दुई जनाले उनको सिक्रि लु टे र भा गेका हुन् । भुँई तल्लामा रहेको दुईवटा कोठा मासिक १० हजार तिर्नेगरी डिल भएपछि उनीहरुले सोधे– ‘घरमा को–को बस्छन् रु’
घरधनी पवित्राले दोस्रो तल्ला भाडामा दिएको र तेस्रो तल्ला`मा छोरो बस्ने जानकारी गराएपछि उनीहरुले ‘सुन, पैसा सवै नदिए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिए । त्यसपछि उप्रेतीले डराएर १ तोलाको सिक्री फुकालेर दिइन् । सिक्री लिएपछि दुईजोर चप्पल छाडेर लु टे रा स्कुटरमा भा गेको बताइएको छ । ‘घर नै लु टे को’ खबर आएपछि प्रहरी उनको घरमा पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय यसरी अपरिचित मानिस कोठा खोज्दै अथवा अन्य कारण देखाउँदै मौका हेरेर लु ट् ने गरेको घटना देखिएको महानगरीय अ प रा ध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले बताएका छन् । ‘एउटै प्रकृतिका केही घटना देखिएको उनको भनाई छ ।
मंगलवार प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका २ लेकखर्क घर भएका ३७ वर्षीय शेर्पा भन्ने कामी लामा, चौतारा बतासे नगरपालिका २ का २३ वर्षीय रमेश तामाङ र रामेछाप धोबी गाउँपालिकाका २७ वर्षीय प्रेम तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुले यसरी नै जग्गा हेर्ने भन्दै असोज २१ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण ८ सुडाल पुगेर ६१ वर्षीय चन्द्रबहादुर योञ्जन लामाको ज्यान लिएको खुल्यो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका रमेश र प्रेम यसरी नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र पैसा लु ट् ने गरेको देखिएको छ।
सरकारले बन्दाबन्दीमा बढाएको सार्वजनिक यातायातको ५० प्रतिशत यातायात भाडा घटायाे
डा. केसीका मागले नेकपा देखि कांग्रेस सम्म भूइचालो, भ्रष्टको दाग लाग्ने भएपछि भी.भी.आई.पी को भागा भाग